Njengamanye amaninzi eWebhsayithi, sisebenzisa iifayile zelog. Iinkcukacha ngaphakathi kwiifayile zelogi ziquka i-intanethi ye-intanethi (IP) iidilesi, uhlobo lwesiphequluli, uMboneleli weNkonzo ye-intanethi (ISP), usuku lomzuzu / ixesha, isitifiketi / ukuphuma kwamaphepha, kunye nenani lokuchofoza ukuhlaziya umendo, ukulawula isayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ukujikeleza isayithi, kunye nokuqokelela ulwazi lwabantu. Idilesi ze-IP, kunye nolunye ulwazi olunjalo aluxhomekeke nakuphi na ulwazi oluchongiweyo.
Cookies kunye lweBheyikhoni yeWebhu
LifeBogger ayisebenzisi ikhukhi.
Nqakraza DART Cookie
. :: Google, njengomthengisi womntu wesithathu, usebenzisa ii-cookies ukulungiselela iintengiso kwi-LifeBogger.com.
. :: Ukusetyenziswa kwe-cookie ye-DART kwenza i-Google isebenzise iintengiso kubasebenzisi ngokusekelwe ekutyeleleni kwabo kwiBomiBogger.com nakwezinye iiwebhusayithi kwi-Intanethi.
. :: Abasebenzisi ukuze Ungaphuma ukusetyenziswa ze cookie DART ngokundwendwela i Google ad kunye nesiqulatho yenethiwekhi umgaqo-nkqubo kwi-URL zilandelayo - http://www.google.com/privacy_ads.html
Abanye baqabane bethu beentengiso bangasebenzisa ikhukhi kunye neebhonacon web kwiwebsite yethu. Umlingane wethu wokuthengisa uthetha ... .Izikhangiso zeGoogle
Kubalulekile ukuqaphela ukuba i-LifeBogger.com ayikwazi ukufikelela okanye ukulawula kula makhukhi asetyenziswa ngabathengisi benkampani yangaphandle.
Kufuneka uqhagamshelane nemigaqo-nkqubo yabucala bee-advers ad party zenkampani yesithathu ngolwazi olunzulu malunga neendlela zabo kunye nemiyalelo malunga nendlela yokuphuma kwiinkqubo ezithile. Umgaqo-nkqubo wabucala we-LifeBogger awusebenzi kuwo, kwaye asikwazi ukulawula imisebenzi, njengabanye abathengisi okanye iiwebhu.
Ukuba unqwenela ukukhubaza cookies, ukuze nenze ngokunjalo ngabodwa zakho iinketho umkhangeli. ulwazi oluthe vetshe malunga nolawulo cookie kunye bencwadi be web ethile lingafumaneka kwi websites ngokulandelelana le bencwadi '.
Siphinde sasebenzise oku kulandelayo:
 Abantu beNkcazo kunye neNzala
Nceda ukhululeke ukudibana nathi kwi-lifebogger@gmail.com okanye i-info@lifebogger.com ukuba unemibuzo malunga neMigaqo-nkqubo Yobumfihlo.
Umhla oLungisiweyo: nge-26 kaSeptemba ngo-2020